Soomaalida oo diiday sheegashada al-Shabaab ee ku aaddan talaalka dabaysha | warsugansomaliya.wordpress.com
In ka badan labo todobaad ayay xag jiriinta al-Shabaab ku guul darreysteen in ay carqaladeeyaan oloolaha qaran ee ay hoggaaminayso xukuumadda si caruurta looga tallaalo cudurka dabasha, sida ay sheegayaan mas’uuliyiinta caafimaadka.
Iyada oo qeyb ka ah ololahooda borobogandada ah, ayay xag jiriinta ku sugan goobaha ay maamulaan ee Buulo Barde, Bu’aale iyo Baardheere ku wareegayeen waddooyinka, iyaga oo faafinaya warar been ah oo ku aaddan talaalka si ay waalidiinta uga cabsi galiyaan.
“Talaalka waa ulajeedo reer galbeed oo Muslimiinta kadhan ah”, ayay xag jiriintu ku sheegeen iyaga oo adeegsanaya cod baahiyayaal ku rakiban gawaari, sida uu sheegayo Cabdinuur Daahir, oo ah 46 jir daggan Buulo Barde.
“Tallaalkan waxa uu ka koobanyahay waxyaabo sun ah oo caruurta naafo ka dhigaya,” ayay xag jiriintu dhaheen. “Tallaalkan waxa uu ka koobanyahay fayruska dhaliya AIDS-ka. Caruurtiina ka ilaaliya!”
Kooxo kale oo al-Qaacidda ku xiran ayaa faafiyay borobogaanddo caynkan oo kale ah iyaga oo beegsanaya olooloyaasha talaalka Afghanistan iyo Pakistan ee caruurta looga talaalayo laleemada dhallaanka, oo ah cudur si wayn looga tirtiray balse ah mid aad halis u ah oo caruurta ku sababi kara in ay caruurta curyaamiyaan.
Si walba oo ay ahaataba, Soomaali badan ayaa diiday in ay rumaystaan sheegashada al-Shabaab ee ku aaddan halista tallaalka.
Dhab ahaantii, qoysaska ayaa soo dhoweeyay ololaha si wayn ayayna isugu soo baxeen si ay caruurtooda tallaal ugu helaan, ayuu yiri Yaasiin Nuur, oo ah mas’uul barnaamijyada tallaalka ah oo ka tirsan Waaxda Caafimaadka ee Wasaaradda Horumarinta iyo Arimaha Bulshada.
“Dalabkan saa’idka ah ee ka imanaya qoysaska si loogu tallaalo caruurtooda waxa ay caddeynaysaa in sheegashada marin habaabinta ah ee al-Shabaab ay ku dhaceen dhago maran,” ayuu Nuur u sheegay Sabahi.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa billowday olole laba qeyb ah oo tallaalka dabaysha ah bartamihii bishii Maajo kadib afar xaaladood oo dabayl ah oo la xaqiijiyay lixdii bilood ee lasoo dhaafay. Wajiga koowaad ee ololaha, ee bilaabanaya Maajo 28-keeda ilaa Juunyo 2-deeda, waxaa lala beegsanayaa in kabadan 640,000 oo caruur ah oo isku da’ ah, ayuu yiri Nuur.
Wasaaradda Horumarinta iyo Arimaha Bulshada ayaa fulisay ololaha iyada oo garab ka halaysa Ururka Caafimaadka Adduunka, Santuuqa Caruurta Qaramada Midoobay (UNICEF), Xafiiska Qaramada Midoobay ee Xiriirinta Bini Aadamnimada iyo ururo kale oo aan faa’ido laga cdooneyn.
Iskaashi lala samaynayo hoggaamiyayaasha bulshada, iyada oo wax la barayo waalidiinta
Dar dar galinta tallaalka, ayay maamulada maxaliga ah iyo hoggaamiyayaasha diinta iyo kuwa qabaa’ilka ay fuliyeen olole si bulshada looga dhaadhiciyo in ay iska indha gtiraan hadalada al-Shabaab, islamarkaana la baro muhimadda ay leedahay ka tallaalidda caruurtooda ee cudurka dabaysha.
Isaaq Aadan, oo xiriiriye ka ahaa ololaha tallaalka ee gobolada Baay iyo Bakool, ayaa ololaaha ku qiimeeyay mid guulaystay.
“Dadaalada wacyi galineed ee bulshada loogu kobcinayo muhiimadda tallaalkan ayaa waxaa ka dhashay in qoysas badan ay ogolaadaan in la tallaalo caruurtooda, iyada oo odeyaasha bulshada, hoggaamiyayaasha diinta iyo hoggaamiyayaasha xeryaha dadka dalka gudihiisa ku bara kacay (IDPS) ay ku booriyeen dadka in ay ka faa’idaystaan tallaalkan,” ayuu yiri Aadan.
Ka hor dadaalkan tallaalka, kooxaha waxyi galinta bulshada ayaa sidoo kale fuliyay booqasho guri guri ah, si ay waalidiinta ugu booriyaan in ayan rumaysan sheegashada beenta ah ee al-Shabaab, ayuu yiri. Shaqaalaha caafimaadka ayaa waalidiinta u sheegay halista cadurka dabaysha, iyo in habka kaliya ay caruurtooda ku difaaci karaan in uu yahay tallaalka.
“Iyada oo ay jirto borobogandada iyo hadalada la isla dhex marayo ee kadhanka ah tallaalka dabaysha ee ay faafiyeen al-Shabaab, xiligan, waxaan u joognay ilaa xad [oo] horumar ah iyada oo inta badan qoysaska ay u soo bexeen in ay fahmaan muhiimadda tallaalidda caruurtooda, waana taa sababta ay u soo dhoweeyeen kooxaha tallaalka intii uu ololuhu socday,” ayuu yiri Aadan.
Cudurka daabaysha oo ku faafaya aagga ay al-Shabaab xukunto
Oloolaha tallaalka ayaa laga fuliyay qeybo badan oo dalka ah waxaana la gaarsiiyay kumanaan caruura oo aan hore galaangal u haysan tallaalka dabaysha. Si walba oo ay ahaataba, al-Shabaab ayaa tallaalka dabaysha ka mamnuucday aagagga ay ka taliso, waxa ayna shaqaalaha tallaalka ka hor istaageen in ay halkaa gaaraan.
Mamnuucidda ayaa nolosha caruurta halis galisay, sida ay sheegayaan shaqaalaha caafimaadka.
“Inkasta oo ka saaridda mintidiinta al-Shabaab laga saaray magaalooyin waaweyn oo ku yaala bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ay ka caawisay shaqaalaha caafimaadka in ay gaaraan caruur aad u badan, islamarkaana lasiiyo talaalka dabaysha … ayaa haddana fayraska dabaysha waxa uu ku faafayaa aagagga ay maamulaan al-Shabaab iyada oo ay adagtahay in la gaaro [aagaggaas],” ayuu yiri Saciid Yuusuf, oo ka tirsan shaqaalaha tallaalka.
Aamina Maxamed, oo ah hooyo 34 jir ah oo ku nool xerada Tawakal ee Muqdisho, ayaa dhammaan caruurteeda siisay tallaalka.
“Waxaan maqlay in al-Shabaab ay ugu baaqayso dhammaan aabayaasha iyo hooyooyinka in aysan tallaalin caruurtooda, iyaga oo sheeganaya in tallaalkan ay soo saareen dalal Masiixiyiin ah, uuna ka koobanyahay walxo sun ah oo caruurta ku sababi kara in ay la taahaan cudur galmada ah marka ay koraan,” ayay tiri Maxamed.
“[Shaqaalaha tallaalka] ayaa noo sheegay in eedeymahan iyo wararkan la isla dhex marayo ee ay soo been abuureen al-Shabaab uu qeyb ka yahay ololaha quusta ah ee [kooxda] ku doonayaan in ay ugu adeegtaan yoolalkooda raqiista ah iyaga oo ku gor gortamaya caafimaadka caruurteena,” ayay tiri. “Dhab ahaantii, waan ognahay in al-Shabaab ay qaldanyihiin, ayna yihiin koox adeegsata sawir diimeed la dhalan rogay, iyada oo eedeymaha iyo wararka la isla dhex marayo ee ay faafinayaan ay yihiin kuwo loo sameeyay in dadka lagu marin habaabiyo. Sidaa daraadeed, waannu diidnay in aan aqbalno sheegashada caynkan oo kale ah ee ay sameeyeen al-Shabaab.”
Q.sugulle mohamoud ,oslo,norway
← Madaxda ugu sareysa Dowlada Federaalka Soomaaliya oo Maanta Muqdisho lagu talaalay(Daawo Sawirada)
Qaladaadka ugu badan uu C/raxmaan Faroole ka galay Qaranka Somalia oo la helay (Akhriso 10 Qodob). →